कर छुट पाउनेमा मिडिया पनि, अनि कसरी हुन्छ त फर्छ्यौट आयोगको विरोध? – MySansar
कर छुट पाउनेमा मिडिया पनि, अनि कसरी हुन्छ त फर्छ्यौट आयोगको विरोध?
Posted on July 18, 2017 July 18, 2017 by Salokya
आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक चुडामणि शर्मा अहिले थुनामा छन्। उनलाई अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत् १० अर्ब कर छुट दिई घोटाला गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ। नियत नै खराब राखी बनाइएको यो आयोगबारे मिडिया कभरेज हेर्नुभएको भए तपाईँले याद गर्नुभएको होला, केही मिडियाको व्यवहार। किन रहेछ त?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत आयोगले प्रतिवेदन दिन मानेको थिएन। तर जनताबाट उठाएको कर किन र कसलाई छुट दिइयो भनेर गोप्य राख्न खोज्ने प्रयास विफल भएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रतिवेदन हात पारेर सार्वजनिक गरेको छ। त्यो हेर्दा पो थाहा भयो, कर छुट पाउने त मिडिया कम्पनीहरु पनि रहेछन्।
कुन मिडियाले कति छुट पाए त ?
एभिन्युज टेलिभिजनले एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएको छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छुट पाएको छ। यो कम्पनीले नागरिक दैनिक, रिपब्लिका दैनिक, नागरिकन्युज डट कम, माइरिपब्लिका डट कम, रेडियो नागरिक सञ्चालन गर्ने गर्छ।
स्पेसटाइम दैनिकले १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट पायो। जमिम शाह प्रकाशक रहेको यो पत्रिका उनको हत्या हुनुअघि नै बन्द भइसकेको थियो।
कामना प्रकाशनले ३३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छुट पायो। यो कम्पनीले नेपाल समाचारपत्र दैनिक, कामना मासिक, साधना पत्रिका प्रकाशन गर्छ।
Companies Tax Discount
TAX DISCOUNT ABOVE 100 MILLION
VAT DISCOUNT > 10 MILLION
पढ्नुस खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट।
7 thoughts on “कर छुट पाउनेमा मिडिया पनि, अनि कसरी हुन्छ त फर्छ्यौट आयोगको विरोध?”
Shiva Kumar Timilsina says:
कर छुट बारे विभिन्न मिडिया ले गरेको कभरेज पनि प्रस्तुत गरिदिन्हुन अनुरोध गर्दछु .
बिजय तामाङ says:
जनताले तिरेको भ्याट लगायत अायकरमा ९९ सय प्रतिशत छुट दिनेलार्इ सर्वस्व सहित अाजिवन कारावास सजाय दिइनु पर्छ । मृत्युदण्ड नेपालको कानूनमा व्यवस्था गरेको छैन नत्र सोझै फाँसी हुनु पर्ने हो । यसरी राजस्व चुहावट गरेपछि देशको विकास कहाँबाट हुन्छ त ? जताततै भ्रष्टाचार र चुहावट । कहीं राजस्वको चुहावट, कतै तेलको चुहावट त कतै बिजुलीको?
भ्रस्टाचार गर्ने र गर्न प्रेरित गर्ने दुवै देश को मह शत्रु/ देश द्रोही हो / दुवै लाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनु पर्छ /
भाटभटेनी भन्ने चाँहि माओवादि सरकार भएकै कारण नाम नआएको हो त?
प्रचन्डकै हो भनिन्छ
Santosh Sedhai says:
तै भएर पो मिडिया पनि तै चुप मै चुप भएका रहेछन् ।नुनको सोझो गर्न त सबै एक शा एक छन।चाहे त्यो भ्रष्ट नेता,कर्मचारी हुन चाहे पत्रकार
नागरिक माथि पहिलानै संका थियो । चूड़ामणि को चूपनी नगरेको डेख्दा
कर छुट नहुने भनेको सर्वा साधारण जनतालाई मात्र हो । थोरै कर तिर्छन् अनि छुट दिए बापत पाउने कमिशन पनि थोरै नै हुन्छ । धेरै कर तिर्नेलाई छुट पनि धेरै हुन्छ अनि छुट दिए बापद कराधिकारीहरुले कमिशन पनि धेरै नै पाउने भए त्यसमाथी मिडियालाई कर छुट दिए पछि हो हल्ला पनि हुने भएन । वाह ! क्या काईदा रहेछ । सिक्नु पर्ने धेरै बाँकी रहेछ हामीले त ।